Ama-Zeolites afaka ama-nano-zeolites kanye ne-zeolite derivatives angahle asebenze kahle futhi enokwethenjelwa ahlanganiswe, asebenze futhi ahlonishwe ngokusebenzisa i-ultrasonication ephezulu yokusebenza. I-Ultrasonic zeolite synthesis kanye nokwelashwa kudlula ukuhlanganiswa okuvamile kwe-hydrothermal ngokusebenza kahle, ubulula, nokuqina okulula komugqa ekukhiqizeni okukhulu. Ama-zeolite ahlanganiswe nge-Ultrasonically akhombisa ubucwebe obuhle, ubumsulwa kanye nezinga eliphezulu lokusebenza ngenxa ye-porosity kanye ne-deagglomeration.
Ukulungiselela okusizwa yi-Ultrasound kwamaZeolites
Ama-Zeolites yi-microporous crystalline hydrated aluminosilicates enezinto zokumunca nezifaka amandla.
Ukusetshenziswa kokusebenza okuphezulu kwe-ultrasound kuthonya usayizi kanye ne-morphology yamakhemikhali e-zeolite ahlanganiswe ngobunono futhi kuthuthukisa ubukristali bawo. Ngaphezu kwalokho, isikhathi se-crystallization sincishiswe kakhulu kusetshenziswa umzila we-sonochemical synthesis. Imizila yokuhlanganiswa kwe-zeolite synthesis ihlolwe futhi yathuthukiswa ngezinhlobo eziningi ze-zeolite. Indlela yokusebenza ye-ultrasonic zeolite synthesis isuselwa ekudlulisweni kwesisindo okuthuthukisiwe okuholela ekukhuleni kwezinga lokukhula kwe-crystal. Lokhu kukhuphuka kwezinga lokukhula kwekristalu kamuva kuholela ekukhuleni kwesilinganiso se-nucleation. Ngokwengeziwe, i-sonication ithinta ukulingana kwe-depolymerization-polymerization ngokwanda kokuhlushwa kwezinhlobo ezincibilikayo, okudingeka ukwakheka kwe-zeolite.
Kukonke, izifundo ezahlukahlukene zokucwaninga kanye nama-setups wokukhiqiza osikali bezindiza kukhombisile ukuhlanganiswa kwe-zeolite kwe-ultrasonic njengesikhathi nezindleko zokonga ezisebenza kahle kakhulu.
I-Ultrasonicator I-UIP2000hdT nge-sonochemical inline reactor ye-zeolite synthesis esebenza kahle kakhulu.
I-Synthesis ejwayelekile vs i-Ultrasonic Synthesis yamaZeolites
I-zeolite ihlanganiswa kanjani ngokujwayelekile?
Ukuhlanganiswa okujwayelekile kwe-zeolite kuyinkqubo echitha isikhathi kakhulu ye-hydrothermal, engadinga izikhathi zokuphendula kusuka emahoreni amaningana kuya ezinsukwini ezimbalwa. Umzila we-hydrothermal uvame ukuba yinqubo ye-batch, lapho ama-zeolites ahlanganiswa kusuka emithonjeni ye-amorphous noma encibilikayo ye-Si ne-Al. Esigabeni sokuqala sokuguga, ijeli elisebenzayo lakhiwa yi-ejenti eqondisa ukwakheka (i-SDA) futhi imithombo ye-aluminium ne-silica ikhulile ezingeni lokushisa eliphansi. Ngalesi sinyathelo sokuqala sokuguga, kwakhiwa okuthiwa ama-nuclei. Lawa ma-nuclei yizinto zokuqala okuvela kuzo kule nqubo elandelayo ye-crystallization amakristalu we-zeolite akhula. Ngokuqaliswa kwe-crystallization, izinga lokushisa lejel liyakhuphuka. Lokhu kuhlanganiswa kwe-hydrothermal kuvame ukwenziwa kuma-batch reactors. Kodwa-ke, izinqubo ze-batch ziza nokuphazamiseka kokusebenza kanzima.
Ukusakazeka kwe-Ultrasonic nano-dispersion kwe-zeolites ne-ultrasonicator UP400St
I-zeolite ihlanganiswa kanjani ngaphansi kwe-sonication?
I-Ultrasonic synthesis ye-zeolite inqubo esheshayo yokuhlanganisa i-zeolite ehambisanayo ngaphansi kwezimo ezimnene. Isibonelo, amakristalu we-50nm zeolite ahlanganiswa ngomzila we-sonochemical ekamelweni lokushisa. Ngenkathi ukusabela okujwayelekile kwe-zeolite synthesis kungathatha kuze kube yizinsuku ezimbalwa, umzila we-sonochemical unciphisa isikhathi sokuqamba sibe ngamahora ambalwa, ngaleyo ndlela sinciphise kakhulu isikhathi sokuphendula.
I-Ultrasonic crystallization ye-zeolite ingenziwa njenge-batch noma izinqubo eziqhubekayo, okwenza uhlelo lokusebenza luguquguqukele kalula emvelweni nasekuqhubekeni kwezinhloso. Ngenxa yokwehla komugqa, ukuhlanganiswa kwe-zeolite kwe-ultrasonic kungadluliselwa ngokuthembekile kusuka enqubeni ye-batch yokuqala iye ekucubunguleni okusemgqeni. Ukucubungula kwe-Ultrasonic – ku-batch naku-inthanethi – ivumela ukusebenza kahle kwezomnotho, ukulawula ikhwalithi kanye nokuguquguquka kokusebenza.
Izinzuzo ze-Ultrasonic Zeolite Synthesis
I-crystallization esheshayo ephawulekayo
I-zeolite esebenza kakhulu (microporosity)
Izinga lokushisa eliphansi (isb. Igumbi lokushisa)
Ukwandisa ukusabela kinetics
Inqubo yeqoqwana noma emgqeni
Ukusebenza kahle kwezindleko
I-FESEM micrograph ye-lithium equkethe i-Bikitaite zeolite, elungiselelwe (a) i-sonication ye-3h, (b) ehambelana ne-EDAX, (c) sonication elandelwa ukwelashwa kwe-hydrothermal ku-100 ° C nge-24h, (d) ehambelana ne-EDAX.
(ukutadisha nesithombe sikaRoy noDas, 2017)
Izithombe ze-SEM zamakristalu we-SAPO-34 ahlanganiswe nge-ultrasonically (SONO-SAPO-34) ne-ultrasonicator UP200S ngaphansi kwezimo ezahlukahlukene.
(Chofoza ukukhulisa! Isifundo nesithombe: Askari noHalladj, 2012)
Imizila ye-Sonochemical Synthesis yezinhlobo ezahlukahlukene ze-Zeolite
Esigabeni esilandelayo, sethula izindlela ezahlukahlukene ze-sonochemical, ezisetshenziswe ngempumelelo ukuhlanganisa izinhlobo ezahlukahlukene ze-zeolite. Imiphumela yocwaningo igcizelela njalo ukuphakama kwe-ultrasonic zeolite synthesis.
I-Ultrasonic Synthesis ye-Li-equkethe i-Bikitaite Zeolite
URoy and Das (2017) ahlanganise ama-50nm lithium aqukethe i-zeolite Bikitaite crystals ekamelweni lokushisa besebenzisa I-UIP1500hdT (20kHz, 1.5kW) i-ultrasonicator ekusetheni iqoqo. Ukwakheka ngempumelelo kwe-sonochemical kweBikitaite zeolite ekamelweni lokushisa kwaqinisekiswa ngokuhlanganiswa ngempumelelo kwe-lithium equkethe i-Bikitaite zeolite ngokuhlaziywa kwe-XRD ne-IR.
Lapho ukwelashwa kwe-sonochemical kuhlanganiswa nokwelashwa okuvamile kwe-hydrothermal, ukwakheka kwesigaba samakristalu we-zeolite kufinyelelwe emazingeni okushisa aphansi kakhulu (100ºC) ngokuqhathanisa ne-300º C ngezinsuku ezi-5, okuyizilinganiso ezijwayelekile zomzila ojwayelekile we-hydrothermal. I-Sonication ikhombisa imiphumela ebalulekile ngesikhathi sekristallization kanye nokwakheka kwesigaba se-zeolite. Ukuze kuhlolwe ukusebenza kwe-Bikitaite zeolite eyenziwe nge-ultrasonically, amandla ayo okugcina i-hydrogen aphenywa. Umthamo wesitoreji uyanda ngokunyuka kwe-Li kwe-zeolite.
Ukwakhiwa kwe-sonochemical zeolite: Ukuhlaziywa kwe-XRD ne-IR kubonise ukuthi ukwakhiwa kwe-pure, nano-crystalline Bikitaite zeolite kuqale ngemuva kwe-3 h ultrasonication kanye no-72 h wokuguga. I-nano-sized crystalline Bikitaite zeolite eneziqongo ezivelele zatholakala ngemuva kwesikhathi esingu-6 h sonication ngo-250 W.
Izinzuzo: Umzila we-sonochemical synthesis we-lithium oqukethe i-zeolite Bikitaite awunikeli kuphela inzuzo yokukhiqizwa okulula kwama-nano-crystals amsulwa, kepha futhi kunikeza inqubo esheshayo nebiza kakhulu. Izindleko zemishini ye-ultrasonic namandla adingekayo ziphansi kakhulu uma kuqhathaniswa nezinye izinqubo. Ngaphezu kwalokho, ubude benqubo yokuhlanganisa bufushane kakhulu, ukuze inqubo ye-sonochemical ibhekwe njengendlela ezuzisayo yokusetshenziswa kwamandla ahlanzekile.
(Bheka uRoy et al. 2017)
Ukulungiselela kweZeolite Mordenite ngaphansi kwe-Ultrasonication
I-Mordenite etholwe ngokusetshenziswa kwe-ultrasonic pretreatment (MOR-U) ikhombise i-morphology ehambisanayo kakhulu yama-pellets ahlanganisiwe 10 × 5 µm2 futhi azikho izimpawu zokwakheka okufana nenaliti noma imicu. Inqubo esizwa nge-ultrasound iholele entweni enezici ezithuthukisiwe zombhalo, ikakhulukazi, ivolumu ye-micropore efinyeleleka kumamolekyu we-nitrogen ngendlela eyenziwe ngayo. Endabeni ye-mordenite eyenziwe nge-ultrasonically-prereated, ukubonwa kwe-crystal okushintshiwe kanye ne-morphology ehambelana kakhulu.
Ngokufingqa, ucwaningo lwamanje lukhombisile ukuthi ukwakheka kwe-synthesis yokwenziwa kwe-ultrasonic kuthinte izakhiwo ezahlukahlukene ze-mordenite etholakele, okuholele ekutheni
ubukhulu be-crystal obufana kakhulu ne-morphology, ukungabikho kwe-fiber engathandeki- namakristalu afana nezinaliti;
kuncane ukukhubazeka kwesakhiwo;
ukufinyeleleka okuphawulekayo kwe-micropore kusampula eyenziwe njenge-mordenite (ngokuqhathanisa nama-micropores avinjiwe ezintweni ezilungiselelwe indlela yasendulo yokugqugquzela, ngaphambi kokwelashwa kwangemva kokwenziwa);
Inhlangano ehlukile ye-Al, okuthiwa ibanga izikhundla ezahlukahlukene ze-Na + cations (into ethonya kakhulu ethinta izakhiwo ze-sorption zezinto ezenziwe).
Ukwehliswa kokukhubazeka kwesakhiwo nge-ultrasonic prereatment ye-synthesis gel kungaba yindlela engenzeka yokuxazulula inkinga ejwayelekile yesakhiwo "esingeyona ekahle" kuma-synthetic mordenites. Ngokwengeziwe, umthamo ophakeme we-sorption kulesi sakhiwo ungafinyelelwa ngendlela elula nephumelelayo ye-ultrasonic esetshenziswe ngaphambi kokuhlanganiswa, ngaphandle kokwelashwa kwendabuko kokusebenzisa isikhathi nezinsizakusebenza (okuphambene nalokho, okuholela ekwakhiweni kweziphambeko zesakhiwo). Ngaphezu kwalokho, inani elingezansi lamaqembu e-silanol anganikela empilweni ende yokuvuselela ye-mordenite elungiselelwe.
(bheka uKornas et al. 2021)
Isithombe se-SEM se-ultrasonically synthesized MCM-22 zeolite
(isifundo nesithombe: UWang et al. 2008)
USolyman et al. (2013) ufunde ngemiphumela ye-ultrasound esebenzisa i-Hielscher ultrasonicator UP200S kuma-H-mordite nase-H-bet zeolites. Bafike esiphethweni sokuthi i-sonication iyindlela ephumelelayo yokuguqulwa kwe-H-mordite ne-H-Beta, okwenza ama-zeolite afaneleke kakhulu ekukhiqizeni i-dimethyl ether (DME) ngokudambisa amanzi kwe-methanol.
I-Ultrasonic Synthesis ye-SAPO-34 Nanocrystals
Nge-sonochemical umzila, i-SAPO-34 (i-silicoaluminophosphate yamangqamuzana emangqamuzana, isigaba se-zeolites) ahlanganiswa ngempumelelo kwifomu le-nanocrstalline kusetshenziswa i-TEAOH njenge-ejenti eqondisa isakhiwo (i-SDA). Nge-sonication, i-Hielscher probe-type ultrasonicator I-UP200S (24kHz, 200 watts) kwasetshenziswa. Usayizi wekristalu omaphakathi womkhiqizo wokugcina olungiselelwe i-sonochemically ngu-50nm, osayizi omncane kakhulu we-crystal uma uqhathaniswa nosayizi wamakristalu ahlanganiswe ngokwenziwa yi-hydrothermally. Ngenkathi amakristalu e-SAPO-34 ayengama-sonochemically ngaphansi kwezimo ze-hydrothermal, indawo engaphezulu iphakeme kakhulu kunendawo engaphezulu ye-crystal yamakhemikhali ahlanganiswe ngokujwayelekile e-SAPO-34 ngokusebenzisa inqubo ye-static hydrothermal ecishe ibe ne-crystallinity efanayo. Ngenkathi indlela ejwayelekile ye-hydrothermal ithatha okungenani i-24 h yesikhathi sokuhlanganisa ukuze ithole ngokugcwele i-crystalline SAPO-34, ngokusebenzisa i-sonochemically-assisted hydrothermal synthesis ngokuphelele i-crystalline SAPO-34 crystals werde etholwe ngemuva kwesikhathi esingu-1.5 h kuphela. Ngenxa yamandla amakhulu kakhulu e-ultrasonic, i-zeolite SAPO-34 crystallization iqiniswa ukuwa kwama-bubble e-ultrasonic cavitation. Ukufakwa kwamabhamuza e-cavitation kwenzeka ngaphansi kwe-nanosecond okuholela endaweni ekushiseni okukhuphuka ngokushesha nokwehla, okuvimba inhlangano nokuhlangana kwezinhlayiya futhi kuholele kosayizi abancane be-crystal. Iqiniso lokuthi amakristalu amancane we-SONO-SAPO-34 angalungiswa ngendlela ye-sonochemical kusikisela ukuminyana okuphezulu kwe-nucleation ezigabeni zokuqala zokwenziwa nokukhula okuhamba kancane kwe-crystal ngemuva kwe-nucleation. Le miphumela iphakamisa ukuthi le ndlela engajwayelekile iyindlela ewusizo kakhulu yokuhlanganiswa kwama-nanocrystals we-SAPO-34 ezithela kakhulu ngezinga lokukhiqizwa kwezimboni.
(isib. Askari noHalladj; 2012)
I-Ultrasonic Deagglomeration kanye nokuhlakazeka kwamaZeolites
Lapho ama-zeolites asetshenziswa ekusetshenzisweni kwezimboni, ucwaningo noma isayensi yezinto ezibonakalayo, i-zeolite eyomile ixutshwe kakhulu esigabeni soketshezi. Ukuhlakazeka kweZeolite kudinga inqubo ethembekile nephumelelayo yokusabalalisa, esebenzisa amandla anele ukususa izinhlayiya ze-zeolite. Ama-Ultrasonicators aziwa kahle njengabahlakazeli abanamandla nabanokwethenjelwa, ngakho-ke asetshenziselwa ukusabalalisa izinto ezahlukahlukene ezinjenge-nanotubes, i-graphene, amaminerali nezinye izinto eziningi ngokufana kufane nesigaba soketshezi.
I-zeolite powder engalashwa nge-ultrasound ihlanganiswe kakhulu ne-morphology efana negobolondo. Ngokuphambene nalokho, ukwelashwa kwe-sonication kwe-5 min (200 mL isampula enikezwe ku-320 W) kubonakala kucekela phansi iningi lezimo ezinjengegobolondo, okuholela kumpuphu wokugcina ohlakazeke kakhudlwana. (bheka uRamirez Medoza et al. 2020)
Isibonelo, uRamirez Medoza et al. (2020) usebenzise i-Hielscher probe ultrasonicator UP200S ukucacisa i-NaX zeolite (okungukuthi, i-zeolite X eyenziwe ngendlela ye-sodium (NaX)) emazingeni aphansi. I-Sonication ngehora lokuqala le-crystallization iholele ekunciphiseni kwe-20% yesikhathi sokuphendula uma kuqhathaniswa nenqubo ejwayelekile ye-crystallization. Ngaphezu kwalokho, bakhombisile ukuthi i-sonication inganciphisa futhi nezinga le-agglomeration le-powder lokugcina ngokusebenzisa i-high-intensity ultrasound isikhathi eside sonication.
Ama-Ultrasonicators Wokusebenza Okuphezulu weZeolite Synthesis
Isoftware eyinkimbinkimbi kanye nesoftware ehlakaniphile yama-Hielscher ultrasonicators yakhelwe ukuqinisekisa ukusebenza okuthembekile, imiphumela ekhiqizwayo kanye nobungani bomsebenzisi. Ama-ultrasonicators ama-Hielscher aqinile futhi athembekile, avumela ukufakwa nokusebenza ngaphansi kwezimo ezinzima zomsebenzi. Amasethingi wokusebenza angafinyeleleka kalula futhi ashayelwe ngemenyu enembile, engatholakala nge-digital color touch-display nange-remote control yesiphequluli. Ngakho-ke, zonke izimo zokucubungula ezinjenge-net energy, amandla aphelele, i-amplitude, isikhathi, ingcindezi nokushisa kuqoshwa ngokuzenzakalela ekhadini le-SD elakhelwe ngaphakathi. Lokhu kukuvumela ukuthi ubuyekeze futhi uqhathanise ukuqhutshwa kwangaphambilini kwe-sonication futhi ukwandise inqubo ye-zeolite synthesis kanye nokusabalalisa ekusebenzeni okuphezulu kakhulu.
Izinhlelo ze-Hielscher Ultrasonics zisetshenziswa emhlabeni wonke ngezinqubo ze-crystallization futhi kufakazelwa ukuthi zithembekile ekuhlanganisweni kwama-zeolites aphezulu kanye nemikhiqizo ye-zeolite. Ama-ultrasonicators ezimboni zeHielscher angasebenza kalula ama-amplitudes aphezulu ekusebenzeni okuqhubekayo (24/7/365). Amplitudes angafika ku-200µm angenziwa kalula ngokuqhubekayo ngama-sonotrode ajwayelekile (ama-ultrasonic probes / izimpondo). Ngama-amplitudes aphakeme kakhulu, ama-sonotrode e-ultrasonic enziwe ngokwezifiso ayatholakala. Ngenxa yokuqina kwabo nokunakekelwa okuphansi, ama-ultrasonicators ethu ajwayele ukufakwa kuzicelo zomsebenzi osindayo nasezindaweni ezifuna kakhulu.
Amaprosesa we-Hielscher ultrasonic we-sonochemical syntheses, i-crystallization kanye ne-deagglomeration asevele efakiwe emhlabeni wonke ngezinga lokuhweba. Xhumana nathi manje ukuxoxa ngenqubo yakho yokukhiqiza ye-zeolite! Abasebenzi bethu abanolwazi oluningi bazokujabulela ukwabelana ngolwazi oluthe xaxa kwi-sonochemical synthesis pathway, izinhlelo ze-ultrasonic kanye namanani entengo!
Ngenzuzo yendlela yokuhlanganiswa kwe-ultrasonic, ukukhiqizwa kwakho kwe-zeolite kuzokwenza kahle kakhulu, kube lula futhi kube nezindleko eziphansi uma kuqhathaniswa nezinye izinqubo ze-zeolite synthesis!
AmaZeolites ayisigaba se-aluminosilicate, okusho i-AlO2 ne-SiO2, esigabeni sezinto eziqinile ezincane ezaziwa ngokuthi “izihlungo zamangqamuzana ”. AmaZeolites ikakhulukazi aqukethe i-silica, i-aluminium, i-oksijini, nezinsimbi ezifana ne-titanium, tin, zinc nezinye izingqimba zensimbi. Igama elithi i-sieve yamangqamuzana lisuselwa endaweni ethile yama-zeolites ukuhlunga ngokukhetha ama-molecule ngokususelwa kunqubo yokukhipha usayizi. Ukukhethwa kwama-sieve wamangqamuzana kuchazwa ngosayizi wawo wepore. Ngokuncika kosayizi wepore, ama-sieve wamangqamuzana ahlukaniswa njenge-macroporous, mesoporous and microporous. AmaZeolites angena esigabeni sezinto ezincane kakhulu njengosayizi wazo wepore <2 nm. Due to their porous structure, zeolites have the ability accommodate a wide variety of cations, such as Na+, K+, Ca2+, Mg2+ nabanye. Lezi ion ezinhle zibanjelwe ngokukhululeka futhi zingashintshelwa kalula kwabanye kusisombululo sokuxhumana. Amanye ama-zeolite amaminerali ajwayelekile kakhulu yi-analcime, chabazite, clinoptilolite, heulandite, natrolite, phillipsite, ne-stilbite. Isibonelo sefomula yamaminerali ye-zeolite yile: Na2U-Al2SI3O 10 · 2H2O, ifomula ye-natrolite. Lawa ma-cation ashintshaniswa ama-zeolite ane-asidi ehlukile futhi enza ukuthi i-acid catalysis ibe ningi.
Ngenxa yokukhetha kwabo kanye nezakhiwo ezithathwe nge-porosity, ama-zeolites asetshenziswa kakhulu njengezinto zokuzivocavoca, ama-sorbents, ama-ion exchange, izixazululo zokwelashwa kwamanzi angcolile, noma njengama-antibacterial agents.
I-faujasite zeolite (i-FAU) ngokwesibonelo ifomu elilodwa le-zeolites, elibonakala ngohlaka olunezikhala ze-1.3nm ububanzi ezixhumene nama-pores we-0.8 nm. Uhlobo lwe-faujasite-uhlobo lwe-zeolite (i-FAU) lusetshenziswa njengesikhuthazi sezinqubo zezimboni ezinjenge-fluid catalytic cracking (FCC), futhi njenge-adsorbent yamakhemikhali e-organic agobekayo emifudlaneni yegesi.